कलाकारकोबीचमा चौँरी नाच्न थालेपछि भयो वाह वाही !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » कलाकारकोबीचमा चौँरी नाच्न थालेपछि भयो वाह वाही !
कलाकारकोबीचमा चौँरी नाच्न थालेपछि भयो वाह वाही !
काठमाडौं । चर्चित निर्देशक तथा निर्माता मिलन चाम्सले नेपाली चलचित्र ‘विर विक्रम’को सिक्वेल ‘विर विक्रम २’को घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै चलचित्रको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई ‘विर विक्रम’ तथा ‘लिली बिली’ जस्ता सफल चलचित्र दिइसकेका चाम्सले आकाश श्रेष्ठ तथा बर्षा शिवाकोटीलाई मुख्य भूमिकामा राखेर चलचित्रको निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
केहि समय अघि अनमोल केसीलाई लिएर ‘ब्याचलर बन्टि’ निर्माणको घोषणा गरेका मिलन चाम्सले हाल अनमोल ‘ए मेरो हजुर ३’ मा व्यस्त भएर समय दिन नसकेका कारण सो प्रोजेक्टलाई पर सार्दै नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सुदिप बरालले छायांकन गर्ने भनिएको यो चलचित्रको छायांकन यहि २६ गतेबाट हिमाली क्षेत्रमा हुने निर्देशक चाम्सले जानकारी दिए । चलचित्रमा समावेश गरिने गीतमा राजेश पायल राई, राजनराज शिवाकोटीलगायतको स्वर रहने छ ।
चलचित्र घोषणा कार्यक्रम एकदमै फरक ढङ्गबाट गरिएको थियो । कार्यक्रममा हिमाली भेगमा पाइने चौरीको नृत्यसमेत देखाईएको थियो । त्यस्तै चलचित्रका कलाकारहरुको बाजागाजाका साथ स्वागत गरिएको थियो ।
चलचित्रमा आकाश र बर्षासँगै नाजिर हुसैन, बुद्धि तामाङ, विनिसा भण्डारी, शिशिर राणालगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ । चलचित्र नयाँ वर्षमा प्रदर्शनमा आउने निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ ।